Isku xirayaasha Soosaarayaasha - Shiinaha Iskuxirayaasha Warshad & Shirkado
✭Iyada oo ay si isdaba joog ah u sii fideyso suuqa robot-ka, shirkado badan oo robot soo saaraya ayaa bilaabay tartan aad u kulul. Nolosha adeegga ee aaladda, hoos u dhigista buuqa ayaa noqotay cilad farsamo oo weyn. Qeybtaan ka mid ah adeegga saxda ah ee loo yaqaan 'servo servo servo' ayaa door aad u muhiim ah leh, maxaa yeelay wada jir kasta oo ka mid ah robotyadu wuxuu u baahan yahay hawlgal si uu u gaaro tallaabooyin kala duwan
✭Qeybteena balaastigga ah waa qeybta guryaha ee qalabka adeegga isteerinka, walxaha caaga ah ee la isticmaalayna waa waxqabadka sare ee PA66 + 30GF. Marka la eego tallaabada qalabka korontada lagu riixo, waxay xaqiijin kartaa in qolofta caaggu aysan isbeddelin oo ay xasilloon tahay inta lagu jiro dhaqdhaqaaqa geerka. Qolofkan balaastigga ahi wuxuu leeyahay shuruudo aad u sarreeya oo ku saabsan saxnaanta caaryada, gaar ahaan dulqaadka cabbiridda godka meelalka qalabka, si loo hubiyo inuu ku jiro xadka dulqaadka ee 0.005mm. Qalabkayaga caaryada waxaa lagu soo saaray iyadoo la adeegsanayo alaabada laga keeno Becu iyo S136.
✭Qolofkan balaastigga ah wuxuu ka kooban yahay saddex madfac oo caag ah, qolof kore, qolof dhexe iyo qolof hoose. Waa inay si fiican isugu ekaadaan si loo hubiyo in booska dhexe ee daloolka marsho uu yahay mid iswaafaqsan. Sidaa darteed, noocan ah qaybaha balaastigga ah ee saxan, saabka caaryada waa 2 oo kaliya, si cabirka si wanaagsan loo xakamayn karo.